Golaha Wakiilada Somaliland oo doortay gudoomiye cusub(Daawo) – Balcad.com Teyteyleey
Kalfadhiga Golaha Wakiilada Somaliland ayaa kulan ay ku yeeheen xaruntooda magaalada Hargeysa waxay ku doorteen Guddoomiye cusub, iyadoo kulankaansi ay ka soo qeyb galeen 78-xildhibaan.
Musharax Baashe Maxamed Faarax oo tartanka la galay xildhibaan C/raxmaan Talyanle ayaa uga guuleystay hal cod oo kaliya, kaddib markii Baashe uu ku guuleystay inuu helo 39-cod, halka C/raxmaan Talyanle uu isna helay 38-cod.
Labada musharax ayaa kahor intii aan cod loo qaadin waxay halkaasi ka jeediyeen khudbado ku saabsan waxqabadkooda haddii ay ku guuleystaan, iyagoona ballanqaadyo fara badan u jeediyay xildhibaanada Golaha Wakiilada.
Guddoomiyaha cusub ee aqalka golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa iska casilay jagada K/Xigeenka Guddoomiyaha Golahaasi, wuxuuna sheegay kaddib markii uu ku guuleystay hoggaanka aqalka wakiilada Somaliland inuu dardar cusub ku wadayo hoggaaminayo.
Dhinaca kale doorashada maanta ka dhacday xarunta golaha Wakiilada Somaliland ayaa timid kaddib markii uu iska casilay guddoon kagolahaasi C/raxmaan Cirro oo ka mid ah musharaxiinta xilka Madaxweynaha ee xisbiga Wadani.
The post Golaha Wakiilada Somaliland oo doortay gudoomiye cusub(Daawo) appeared first on Ilwareed Online.